भारतमा पनि भयो प्रधानन्यायाधीशको विरोध - Koshi Online
भारतमा पनि भयो प्रधानन्यायाधीशको विरोध
भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरेका छन् । चारजना वरिष्ठतम न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्याधीशको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।
शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजना गरिएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको पत्रकार सम्मेलनलाई ऐतिहासिक घटना मानिएको छ । यो पत्रकार सम्मेलन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मदन लोकुर, रन्जन गोगोई, कुरियन जोसेफ र जे. चेलमेश्वरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलन गर्ने न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कडा आलोचना गर्दै उनीमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णयको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरे । भारतीय सर्वोच्च अदालतका दोस्रो वरियताका न्यायाधीश जे. चेलमेश्वरले समग्र विश्वकै न्याय व्यवस्थाको अस्तित्वरक्षाका लागि न्यायपालिका भित्रको विकृतिविरूद्ध आवाज उठाएको बताए ।
उनले लोकतन्त्रको संवर्द्धनका लागि न्यायपालिका निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक स्वेच्छाचारीताबारे पटक-पटकको ध्यानाकर्षणका बाबजुद प्रधानन्याधीशले सुधारमा चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । उनले भविष्यमा आफूलाई आत्मालाई बन्धक बनाएर ओहदामा बसेको आरोपबाट बचाउन सचेत भई अहिले नै अनियमितताको पर्दाफास गरेको धारणा राखे । सन् २०१८ अक्टोबर २ तारिखमा १३ महिने कार्यकाल पूरा गरी अवकाश प्राप्त गर्न लागेका प्रधानन्याधीश दीपक मिश्र वरिष्ठताका आधारमा पदमा पुगेका हुन् ।